Akụkọ - Ọtụtụ ebe Ngwa nke Cooling Tower
A na-eji ụlọ elu jụrụ oyi mee ihe maka ikpo ọkụ, ikuku, na ikuku ikuku (HVAC) na ebumnuche ụlọ ọrụ. Ọ na-enye usoro arụmọrụ dị oke ọnụ ma na-arụ ọrụ ike dị mkpa nke jụrụ oyi. Ihe karịrị ụlọ ọrụ mmepụta ihe 1500 na-eji nnukwu mmiri iji mee ka osisi ha dị jụụ. A na-eji usoro HVAC eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ọfịs, ụlọ akwụkwọ, na ụlọ ọgwụ. Coolinglọ elu jụrụ oyi nke ụlọ ọrụ buru ibu karịa sistemụ HVAC ma jiri ya wepu okpomọkụ etinye obi gị dum na sistemụ ikuku mmiri na-ekesa na-eji osisi ike, mmanụ mmanụ, osisi petrochemical, osisi nhazi gas, osisi nhazi nri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Usoro mmepụta ihe na igwe na-ewepụta oke ọkụ dị ukwuu nke na mgbasawanye na-aga n'ihu dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ọma. Okpom oku aghaghi ibu na gburugburu ebe obibi. Nke a bụ site na usoro mgbanwe okpomọkụ nke bụ ihe ndabere nke teknụzụ ụlọ elu jụrụ oyi.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na n'agbanyeghị ụlọ elu jụrụ oyi bụ ngwaọrụ nke 20Nke narị afọ, ihe ọmụma banyere ha nwere oke. Fọdụ ndị mmadụ kwenyere na ụlọ elu jụrụ oyi bụ ihe na-akpata mmetọ, mana naanị ihe ha hapụ ikuku bụ vapo mmiri.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe nke teknụzụ a, ụlọ elu dị jụụ dị na ụdị na nha dị iche iche. Onye ọ bụla n'ime ndị a bụ na ọdabara na ụfọdụ ibu nhazi, ihe mere na ọ dị mkpa ka guputa nhọrọ dị. Rịba ama na n'agbanyeghị atụmatụ dị iche iche, ọrụ bụ isi na-anọgide dị ka nke ịgbasa okpomọkụ site na usoro ụlọ ma ọ bụ usoro na ikuku site na evaporation. Ndị a bụ ụfọdụ nkọwa:
A.Mechanical draft jụrụ ụlọ elu
B.Ikuku jụrụ ụlọ elu
C.Towerlọ elu jụrụ ngwakọ
DUlo elu ikuku nwere ikuku
E.-Lọ elu-ji jụrụ ụlọ elu
F.Ebu ejiri ụlọ elu jụrụ oyi
G.Towerlọ elu jụrụ oyi na-adabere na usoro nke ikpo ọkụ
Onye nke ọ bụla n’ime ha nwere ike ibu ọtụtụ ụlọ elu jụrụ oyi. Dịka ọmụmaatụ, ịkọwa ụlọ elu dị jụụ n'okwu banyere usoro ntụgharị ọkụ na-enye nhọrọ atọ: Dlọ akọrọ dị jụụ, circuitlọ elu ikuku dị jụụ na ụlọ nche mechiri emechi / ụlọ mmiri jụrụ oyi.
Towlọ elu dị jụụ nwere ike ịdị ọnụ ọnụ maka nrụpụta ụlọ ọrụ na-atụnyere nhọrọ ndị ọzọ, mana nsogbu ịma aka nwere ike ịbụ mbibi. Nlekota oru ihe di nkpa di nkpa ka odi nma ihe ndia:
►Belata mmiri oriri
►Ngwaọrụ ọrụ gbatịrị agbatị
►Belata ụgwọ ọrụ
Iji mee ka ụlọ elu jụrụ oyi na-agba ọsọ nke ọma, ihe atọ dị mkpa: ghọta ụdị ụlọ elu jụrụ oyi ị na-eji, jiri kemịkal rụọ ọrụ nke ọma ma soro nsị mmiri sistemụ.
Igwe ikuku jụrụ oyi bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, ndị isi n'etiti ha bụ ike, azụmahịa, HVAC na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe, sistemụ na-ajụ igwe site na igwe, ihe eji ekpo ọkụ n'etiti ihe ndị ọzọ. Kpọmkwem, ụlọ elu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-adịkarị na ebe a na-edozi nri, ebe a na-esi mmanụ mmanụ, osisi gas na osisi petrochemical.
Ndị ọzọ ulo oru ngwa:
►Mmiri mma compres ikuku
►Plastic injection & igbu ịkpụzi igwe
►Die mgbatị igwe
►Refriji na chilling osisi
►Anodizing usoro osisi
►Ọkụ eletrik na-arụ ọrụ
►Mmiri jụrụ oyi na-enye igwe ikuku ikuku na igwe VAM
Họrọ ihe ngwọta dị jụụ bụ ụdị ntụle zuru ezu nke ụgwọ, ohere, mkpọtụ, ụgwọ ume na nnweta mmiri. Ọ bụrụ na ị maghị ụdị nke ịchọrọ, biko kpọtụrụ anyị maka ntuziaka ndị ọzọ n'efu.